Android Wear အတွက်လိုအပ်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် Internet Browser ကိုဝတ်ဆင်ပါ Androidsis
Android Wear အတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းများ - ယနေ့အင်တာနက်ဘရောက်ဇာကိုဝတ်ပါ
Francisco Ruiz | | Android application များ, စမတ်နာရီ
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤတွင်နောက်တဖန်ဒီမှာဖြစ်ကြသည် Android Wear အတွက်လိုအပ်သည့်အက်ပ်များရှိသည်၊ အကောင်းဆုံးသောအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုရှာဖွေရန်သို့မဟုတ်စစ်ထုတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ရည်ရွယ်ထားသည့်စမတ်နာရီများအတွက်တရား ၀ င်သို့မဟုတ်အပိုထပ်ထည့်နိုင်သည်။ Moto 360 ရုံကနေယောက်ျားတွေအားဖြင့်တင်ပြခဲ့သည် Motorola က ဒါကြောင့်ပါပဲ El Corte Ingles ကဲ့သို့သောစျေးဝယ်စင်တာများတွင် ၀ ယ်ယူနိုင်သည် ၏စျေးနှုန်းမှာ 249 ယူရို.
ဤအခါသမယတွင်ငါသည်သင်တို့ကိုစတိုင်တစ်ခုလျှောက်လွှာကိုတင်ပြသွားပါလိမ့်မယ် အင်တာနက်ရေကြောင်းပြAndroid Wear လည်ပတ်ရေးစနစ်နှင့်အတူဤစမတ်နာရီများ၏မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားကြောင့်လိမ်ညာပုံရသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ Android စမတ်နာရီတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ မင်းနာမည် အင်တာနက်ဘရောင်ဇာကို ၀ တ်ပါပြီးတော့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဗွီဒီယိုတစ်ခုမှာဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ application ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Wareable Android မှာလုပ်နိုင်တာအားလုံးကိုရှင်းပြတယ်။ ၌ဤတိကျတဲ့အမှု၌ Motorola Moto 360.
ဒီလိုင်းတွေရဲ့အောက်ကဗီဒီယိုမှာမင်းဘယ်လိုမြင်နိုင်မလဲ။ အင်တာနက်ဘရောင်ဇာကို ၀ တ်ပါ Android Wear operating system ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android Wareables တွင်ကြီးမားသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေးထားသည်။ အထူးအတွက်ဒီဇိုင်းလုပ်ထားသော web browser တစ်ခု ဒီသေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားဖန်သားပြင် fit ကျွန်ုပ်တို့မှမည်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုမဆိုပြproblemနာမရှိဘဲဖတ်နိုင်လိမ့်မည်။ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သောသူတို့ကိုယ်တိုင်နှင့်မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များသာမကမိုဘိုင်းအတွက်အဆင်မပြေသေးသောဝက်ဘ်ဆိုက်အနည်းငယ်ကိုပါဖတ်ရှုနိုင်လိမ့်မည်။ ကိရိယာများ။ ပြီးတော့နောက်ဆုံးပေါ်ကိစ္စမှာ Android Smartphone (သို့) တက်ဘလက်တွေလိုလှုပ်ရှားမှုကိုကျွန်တော်တို့စွမ်းဆောင်နိုင်မှာပါ ပင်နံပါတ်သို့ချဲ့ရန် စာသားကိုကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်တိုးချဲ့ရန်။
မီးမောင်းထိုးပြရန်အတွက်အခြားအင်္ဂါရပ်များသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတွင်ဖော်ပြထားသည် အသံဆက်သွယ်မှုAndroid Wear နှင့်အခြားအရာများမည်သို့ဖြစ်နိုင်မည်နည်း ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်လုပ်တဲ့ linear ကီးဘုတ်စကားလုံးသေးသေးလေးများသို့မဟုတ်အသံဆူညံသည့်နေရာများတွင်အသံရှာဖွေခြင်းသည်အလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်းနှင့်နားမလည်သောနေရာများတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အရာအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်း အင်တာနက်ဘရောင်ဇာကို ၀ တ်ပါ, ငါသည်ဤအပိုင်း၌ထည့်သွင်းရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ Android Wear အတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည့်အက်ပ်များယုတ္တိနည်းကျစွာအထူးအကြံပြုလိုသည်။
Wear OS အတွက် Web Browser (Android Wear)
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » စမတ်နာရီ » Android Wear အတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းများ - ယနေ့အင်တာနက်ဘရောက်ဇာကိုဝတ်ပါ
Samsung 4.4.4 အတွက် Android XNUMX ကို update လုပ်ပါ